Sahiko ny mianiana aminao tompoko fa tsy naninona ny zanakao aho fa nivoaka nandihy fotsiny izahay dia izay. Izaho koa aza letsy mba tena kamo ah , nefa ny bac ity efa afaka dimy volana sisa. Izany kosa ny ahy ny toe-tsaina tsy tiako. Isaorako Andriamanitra fa afaka nihaona taminao aho na dia indray mandeha fotsiny aza. Tiako anie ianao eh! Afaka miady hevitra anie isika ry dada ary mitady ny marimaritra iraisana fa ianao mihitsy no madi-doha tsy azo akisoka eh. Fa maninona ity ianao ity eh , ohatry ny romotra mihitsy.
Sa ampiana indray iny felaka iny? Ka maninona raha hierana ny izy roa vavy eh. Rehefa miteny aho hoe tsy mahazo dia tsy mahazo. Dia tsy hanampy ahy kosa ve ianao? Ka ianao no mahay izay lazainao hoe fikanao koh. Inona no maharay aman-dreny sy zanaka antsika raha tsy hifampatoky ohatra izany? Mba mananihany re aho fa ianao koa eh!
Dia izaho koa nampiaraka? Mba mananihany re aho fa ianao koa eh! Tahtara ny tena marina izany mankaty ny olona na tanora na ny antitra handihy? Hiera amin-dry zareo aho izany? Nony nifarana ny fotoana dia nifanao veloma izahay.
Tezitra aho ary nanapa-kevitra ny tsy hamaly ny hafatra nalefany intsony mba hanehoako aminy fa zava-dehibe ho ahy ny hihaona mivantana aminy ary tsy fitiavan-jaza ny ahy fa tena matotra. Mba tiako ho fantatra tantarz ny fitiavanao ahy eh. Ehh mamoha azy aiza kosa no dia matory sahady?
Indrisy nefa fa nolaviny izany fangatahako izany ary nilaza izy fa tsy afaka. Tsy maintsy handalovako ny nandalovanao fa ny mampitandrina ahy tsy hivoaka ny lalana tokony alehako no anjaranao. Gaga i neny nahita ny fiovako satria na ny volom-bavako aza hono tsy voaaratro intsony ary lasa tsy mahatelin-kanina sy misentosento lava izany hono aho. Tsy misy inona re eh!
Efa tena salama i Mahandry izao ary miomankomana ny hiakatra any Iarivo izy hamangy fianakaviana, satria nahazo fialan-tsasatry ny krismasy nandritry ny telo herinandro mizeho mpianatra.
Marary saina sa maninona no dia tsy mety hovana hevitra mihitsy fa miziriziry ohatry ny olona maninona?
Tantara Indray Miseho mp3 Song
Isaorako Andriamanitra fa afaka nihaona taminao aho na dia indray mandeha fotsiny aza. Maty indeay ilay malalako ahmafy letsy izany ahmarina raha zakako intsony izy?
Na rehefa manjoko aza angamba aho mbola tsy ho vita ny fianarana ,dia tsy haiko intsony hoe rahoviana aho no mba hiaraka aminao. Azoko natao tsara ny nanatitra azy satria nitondra fiara aho, saingy nihaotra ny tenako, dia ka iny aho namonjy fodiana.
Fa maninona mihitsy ianao ity eh? Koa mazotoa ary mamaky ny tantara. Hay kosa ve ry zareo tsy ho eo eh. Herinandro ianao tsy namaly ny hafatro, fantatro fa tezitra ianao ary tena azoko tsara izany. Herinandro toa izay ihany, tsy nisy fifaneraserana intsony teo aminay, tsapako ho tena banga azy ny fiainako. Inrray ny tiako mihitsy izany ho vadinao izany!
Aza mieritreritra ny rahampitso izany fa ny izao aloha no fantatro. Tsy misy hidiranao ahoana ny resakay? Ny anao kosa hay izy efa nitaraina hoe mararirary kibo fa mbola nentinao nivoaka ihany.
Nanomboka io andro io dia nifandray tsy tantaa izaho sy i Miangola.
Tantara indray miseho: Anatry ny lasa | BLAOGY RTN
Anatry ny lasa voromailala 26 Mey, Ohatry ny tsy dia rototra anie ianao izany ehfa tsy faly angaha? Misaotra anao aho ry Rohy fa nanome fifaliana ny androko sisa ianao. Fa tsy ianao akory no niray tsikombakomba taminy sy nitaritarika ny fatiny hatraty? Mifampitantara izao rehetra izao izahay: An an an sao tsy mety ny ataontsika?
Nahatsiaro tena ho irery i Mahandry nandritry, mahatsiaro ny reniny, ny rainy ireo iray tam-po aminy sy i Ony olo-tiany any Iarivo izy. Tantara Manaraka Mialoha Hevitra 5 Verindrohy trackback 0.
Inona akory no izany eo.